Puntland oo taageertay dhiibistii Qalbi-dhagax - Ceelhuur.com | Ceelhuur.com
Home » Wararka Maanta » Puntland oo taageertay dhiibistii Qalbi-dhagax Date :September 12, 2017 Author :admin 2 views
Puntland oo taageertay dhiibistii Qalbi-dhagax
Maamulka Puntland ayaa taageeray go’aankii dowaladda federaalka Soomaaliya dhawaan ku dhiibtay C/Kariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo kamid ahaa Saraakiisha sare ee Jabhada ONLF ee u dagaalanta xoreynta Soomaali galbeed.
Wasiiru Dowladaha Xariirka Gobalada ee Puntland Bashiir C/raxmaan Xaaji Gurxan ayaa sheega in uu soo dhaweenayo uuna bogaadinayo go’aankii Xukuumada Soomaaliya ku wareejisay C/Kariin Qalbi Dhagax.
Waxa uu sheegay Wasiirka in Xukuumada Soomaaliya ay qaadatay go’aan muhiim ah oo laga fiirsaday, waxa uuna intaa raaciyay in ay taageerayaan go’aanka Xukuumada Soomaaliya ka qaadatay arinta Qalbi Dhagax.
“Go’aankii ay qaateen 6dii Bishaan Xukumadda waan taageersanahay waana mid sax ah oo aduunka oo dhan nagu taageeray waana inaa diidnaa cid kasta oo Soomaaliya Gudahadeeda ugu diilasa Wadamada dariska ah” ayuu yiri wasiiru dowlaha Xariirka gobalada ee puntland
Wasiiru Dowladaha Xariirka Gobalada ee Puntland ayaa ugu baaqay Labada Golle ee dowlada in ay joojiyaan mooshina ka dhanka ah Xukuumada Soomaaliya , waxa uuna kula taliyay in arinta Qalbi Dhagax asan dalkooda u dumin.
Inta badan Maamul goboleedada dalka ka jira ayaa taageersan go’aankii Xukuumada Soomaaliya ku wareejisay C/Kariin Qalbi Dhagax, waxa ayna Madaxda maamul goboleedyada qeyb ka yihiin kala fur furka xildhibaanada Xukuumada ku kacsan.